Abakhiqizi bebhola be-Ball, abahlinzeki - China Ball Bearing Factory
I-Cylindrical Roller Bearings
Angular Imininingwane Ball Bearings
Amabhele weBall Bearing
Yelula Ball Bearings
Umcamelo Block Ball Amabombo
Isondo Hub Amabombo
I-Miniature Deep Groove Ball Bearing
Isitolo esidayisa yonke impahla Inani China China Factory Good Quality Com ...
OEM Factory for China 6203 Izinga Lokushisa Eliphezulu Spe ...
China Intengo eshibhile China Miniature Ball Bearings 608, ...
Intengo eshibhile China Hand Spinner Factory Isitolo esidayisa yonke impahla Fid ...
Umkhiqizi wenaliti roller roller
Ezezindlu cylindrical roller eziveza
Ukusebenza High Auto Wheel Hub Ukunikela
Ukunikela ngezindlu umcamelo block ophethe ucp 200series
ikhwalithi ephezulu yethafula lokuphonsa ibhola
NTN / NSK / KOYO Deep groove ball equkethe 6300series 、 64 ...
Umthengisi we-roller ozibandakanya ngokwakho
Ikhwalithi ephezulu ye-tapered roller equkethe uchungechunge lwe-30200, 3 ...
Umthombo Factory Nsk Deep Groove Ball Amabombo
OEM / ODM Umkhiqizi emincane Imininingwane Ball Ukunikela Fo ...
● Ibhola le-deep groove lingenye yamabheringi egingqikayo asetshenziswa kakhulu.
● Ukumelana okuphikisana okuphansi, isivinini esikhulu.
● Isakhiwo esilula, esisebenziseka kalula.
● Kusetshenziswe ku-gearbox, insimbi nemitha, imoto, into yasendlini, injini yomlilo yangaphakathi, imoto yethrafikhi, imishini yezolimo, imishini yokwakha, imishini yokwakha, ama-roller roller skate, i-yo-yo ibhola, njll.
Umugqa owodwa we-Deep Groove Ball Bearings
● Umugqa owodwa webhola webhola we-groove ojulile, amabombo wokugingqa yisakhiwo esimele kakhulu, izinhlelo eziningi ezahlukahlukene.
● I-torque yokuphikisana okuphansi, efaneleke kakhulu kuzinhlelo zokusebenza ezidinga ukujikeleza kwejubane elikhulu, umsindo ophansi nokudlidliza okuphansi.
● Isetshenziselwa kakhulu imishini yezimboni, kagesi, neminye imishini eyahlukahlukene yezimboni.
Irowu Double Deep Groove Ball Bearings
● Idizayini ngokuyisisekelo iyefana naleyo yamarowu owodwa we-deep groove ball bearings.
● Ngaphandle kokuthwala umthwalo osabalalayo, futhi ingathwala umthwalo we-axial osebenza ezinhlangothini ezimbili.
● Izivumelwano ezinhle kakhulu phakathi komgwaqo nobhola.
● Ububanzi obukhulu, umthwalo omkhulu wokulayisha.
● Kutholakala kuphela njengamabheringi avulekile futhi ngaphandle kwezimpawu noma izihlangu.
Engagqwali Deep Groove Ball Bearings
● Isetshenziselwa ukwamukela umthwalo osabalalayo, kepha futhi ingamelana nomthwalo othile we-axial.
● Lapho ukuvuleka kwe-radial ye-bearing kukhuphuka, inomsebenzi wokuthwala ibhola othintekayo we-angular.
● Ingathwala umthwalo omkhulu we-axial futhi ilungele ukusebenza ngejubane elikhulu.
● Ingabe ukuguqulwa okuqukethe ibhola elijulile le-groove.
● Inezinzuzo zesakhiwo esilula, isivinini semikhawulo ephezulu kanye ne-torque encane yokuqagela.
● Ingathwala imithwalo ye-radial ne-axial ngasikhathi sinye.
● Ingasebenza ngejubane elikhulu.
● Uma i-engela yokuxhumana ikhudlwana, amandla e-axial bearing ayanda.
Umugqa owodwa we-Angular Contact Ball Bearings
● Ingathwala kuphela umthwalo we-axial ohlangothini olulodwa.
● Kumele ifakwe ngababili.
Irowu Double Angular Imininingwane Ball Bearings
● Idizayini yamarowu we-angular irowu we-angular ball bearings ngokuyisisekelo ayafana ncamashi neyomugqa owodwa we-angular ball bearings, kepha ithatha isikhala esincane se-axial.
● Ingakwazi ukuthwala umthwalo osabalalayo nomthwalo we-axial osebenza ezinhlangothini ezimbili, kungakhawulela ukufuduka kwe-axial kushaft noma kwendlu ezinhlangothini ezimbili, i-Angle yokuxhumana ingama-degree angama-30.
● Inikeza ukumiswa okuphezulu kokuqina, futhi ingamelana ne-torque yokugumbuqela.
● Isetshenziswa kakhulu kuhabhu engaphambili lemoto.
Amaphoyinti amane wokuthinta ibhola
● Ukuthwala ibhola elinamaphoyinti amane uhlobo oluthile lokuhlukaniswa kohlobo oluhlukanisiwe, futhi kungashiwo ukuthi kuyisethi yokuthwala kwebhola lokuxhumana okungamamitha okungathwala umthwalo we-axial bidirectional.
● Ngomugqa owodwa nomugqa ophindwe kabili we-angular contact ball bearing function, isivinini esikhulu.
● Kusebenza kahle kuphela lapho amaphuzu amabili wokuxhumana esakhiwe.
● Ngokuvamile, ilungele umthwalo we-axial omsulwa, umthwalo omkhulu we-axial noma ukusebenza kwejubane elikhulu.
Amabhele we-Ball Wokuziqondanisa
● Inomsebenzi ofanayo wokushuna njengokuthwala okuzenzakalelayo kwebhola okuzibandakanya
● Ingathwala umthwalo osabalalayo nomthwalo we-axial ezinhlangothini ezimbili
● Umthamo omkhulu we-radial load, ofanele umthwalo osindayo, umthwalo womthelela
● Isici sayo ukuthi umjaho wangaphandle wendandatho uyindilinga ngomsebenzi wokugxilisa othomathikhi
● Yenzelwe ukumelana nemithwalo yejubane elikhulu
● Inendandatho emise okwe-washer enendawo yokudonsa ibhola
● Amabhere we-Thrust ball ahlanganisiwe
● Ihlukaniswe ngohlobo lwezihlalo oluyisicaba nohlobo lwebhola lokuziqondanisa
● Ukuthwala kungathwala umthwalo we-axial kepha hhayi umthwalo osabalalayo
I-Linqing Xinri Precision Bearing Co, Ltd ngumkhiqizi okhiqiza umndeni okhethekile kusukela ngonyaka ka-2006, ifilosofi yethu: ukuzuza ukwethembeka ngokwethembeka, ukunqoba ngekhwalithi, ukuthuthuka ngokwenza izinto ezintsha, futhi sizenzele amathuba ethu ngomoya omangalisayo. [..]
Ikheli: I-Yan Dian Town Industrial Park, iLinqing City, Isifundazwe saseShandong, eChina
Ucingo: + 86-635-2857766
Ifekisi: + 86-635-2857768